भोलि असार १९ गते बिहिवार , तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - Bigul News
भोलि असार १९ गते बिहिवार , तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
असार १८, २०७६ Bigul TV
भोलि बिक्रम संवत २०७६ साल असार महिनाको १९ गते बिहिवार तद अनुसार सन् २०१९ जुलाई ४ तारिख, तपाईको दिन कस्तो रहला हेर्नुहोस भोलिको राशिफल !
मानसिक संबेदनशीलताका कारण साना साना कुराले भावनामा ठेस पुर्याउन सक्नेछ। आमाको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले चिन्तित भइने छ। आत्मग्लानीको महसुश हुनेछ। अनिन्द्राले सताउने छ। समयमा भोजन नमिल्नाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिने छ।
आयआर्जनमा वृद्धि हुनेछ। छोटो दुरीको सुखमय यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक कारोवारका लागि समय अनुकुल रहेको छ। गुमेको पैसा हात लागि हुनेछ। साहित्य लेखनको क्षेत्रमा रुचि बढ्ने छ। समग्रमा भोलिका लागि तपाईको दिन सुखमय रहेको छ।
आफन्तजनको आगमनले पारिवारिक माहोल उल्लासमय रहनेछ। आकस्मिक धन लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। उत्तम भोजन साथै यात्राको अवसर मिल्नेछ। कार्यमा अनपेक्षित लाभ मिल्नेछ।
सानातिना कार्यमा अल्झिने समय रहेको छ। सहयोगीले साथ छोड्नेछन। परिवारमा सुख शान्तिको माहोल सिर्जना हुनेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। शुभ समाचार सुन्न पाइने छ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। दाम्पत्यजीवन सुखद बित्नेछ।
अपेक्षा गरे अनुसार कार्यमा सफलता नमिल्नाले निरास हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा अचानक परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु पर्नेछ। अनावश्यक खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। बाणी र व्यवहारमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
धार्मिक एवम आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ। पढाई लेखाईको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। मातापिताको तर्फबाट प्रसस्त साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। सन्तान सुखको अनुभूति हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउने छ। प्रियमित्र संगको भेटघाटले मनमा उत्साहको मात्रा बढेर जानेछ।
व्यापार व्यवसायको क्षेत्र लाभदायक रहेको छ। आयआर्जनका प्रसस्त बाटो खुलेर जानेछ। परिवारमा हर्सोल्लासको वातावरण सिर्जना हुनेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। माताको तर्फबाट लाभ मिल्ने देखिन्छ। सरकारी कार्यमा सफलता मिल्नेछ।
बिश्वास गरेकाहरुले साथ छोड्ने छन। शारीरिक थकान तथा आलस्यता बढ्नेछ। उच्च पदाधिकारीको साथ अनि सहयोग भरपुर पाइने छ। पारिवारिक झैँ झमेलाको स्थिति सिर्जना हुन सक्ला। नयाँ कार्यको थालनी सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो होला।
नयाँ कार्यको सुरुवात सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। पेट दुखाई सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ। अचानक खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। बाणी तथा व्यवहारमा संयममित रहन आवश्यक रहेको छ।
अपेक्षा गरे अनुसार कार्यमा सफलता मिल्नाले मनमा उत्साह छाउने। स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति हुनेछ। साथीभाई तथा इष्टमित्रका साथमा घुम्ने फिर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक धनलाभ हुने योग रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रमा मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ।
व्यापार व्यवसायबाट राम्रै मुनाफा कमाउन सकिनेछ। यश किर्ति बढेर जानेछ। नोकरी व्यवसायको क्षेत्रमा सहकर्मीको राम्रै साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। शुभ समाचार सुन्ने अवसर मिल्नेछ। समग्रमा कुम्भ राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले खानपानमा बिशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। सिर्जनात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा आत्मियता बढ्ने छ। मनलाई स्थिर राख्नाले महत्वपुर्ण कार्य हात लागि हुनेछ। पढाई लेखाईको कार्यमा सफलता मिल्नेछ।
प्रकाशित : बुधबार, असार १८, २०७६१९:५५
भोलि असार २० गते शुक्रवार , तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !